Tiri pamwe kuti vatengi edu kubvira pakutanga kuonana kusvika pashure-okutengesa basa. Somunhu zvekushandisa consultant, tinokurukura zvinodiwa ne vatengi vedu uye kukudziridza zvinogadzirisa kuti vawedzere kunyatsoshanda uye akawedzera-ukoshi. Pamwe yose - ISO 9001 vaipupurirwa muitiro cheni - tinopa chinonyanya kukwezva mhinduro pasuru.
Tiri kugara munzira.
Mês zvakangwara workshop utariri hurongwa
The akangwara chiratidzo hurongwa pamwe akazvimirira hunyambiri-musoro Laser hurongwa anosarudza Golden Laser yakatanga kushanda zvapamutemo, uye zvinobudirira vakashandisa mumunda wamatehwe nokuveza kuti shangu.
Golden Laser akafunga inokosha urongwa "Golden Mode: Platform + Ecological Circle" kuwedzera kuvaka mukuru-kuguma Laser muchina uye 3D digitaalinen Michina chikumbiro utsanzi pachikuva - "Golden +".
Golden Laser akanga pamutemo yakasimbiswa Sales uye Service Center muUnited States uye Vietnam.
Golden Laser pamwe Wuhan Textile University vagadze denim Laser kushanda murabhoritari.
mamiriro kwesangano chekambani yave kugadziridzwa chaizvo. subsidiaries Several nekupatsanurana zvakatangwa.
Nhunzi kushanda pakuvheneka chiono Laser nokuveza hurongwa yakatanga nokuda dhayi-sublimation mbatya indasitiri akanga vakabudirira kwakatangwa.
Muna May 2011, Golden Laser akanga pamutemo dzakanyorwa pamusoro Growth Enterprise kuMusika Shenzhen Stock Exchange ( wemari code: 300220 )
Pamutemo munyaya mumunda internet Laser nokuveza nokuda simbi, kuti chikamu kambani Wuhan Vtop Fiber Laser Engineering Co., Ltd rakavambwa.
CO2 RF simbi lasers yakataurwa Golden Laser vakanga kwakatangwa.
Automatic Galvo Laser achiita zvokutemera marongedzero mupumburu zvinhu kwakatangwa.
Golden Laser 3.2 metres vokutanga super-rakapamhama CO2 Laser nokuveza muchina wanunurwa. The customization Kukwanisa kuti yendarama Laser kuti hombe Manyorerwo flatbed CO2 Laser nokuveza Machine inozivikanwa munyika indasitiri.
Kupinda maindasitiri jira indasitiri. Nguva yokutanga kuti ndiitewo filtration indasitiri kuratidzwa, kubudirira rakapa rumbidzo.
Bridge Laser nomusoni muchina kwakatangwa, kuzadzika mubatanidzwa kombiyuta dzakarukwa uye Laser okurwadzisa akakwana.
3D simba kuisa guru-youduku galvanometer Laser achiita zvokutemera hurongwa akabuda.
The epamba bvumidzwa muenzaniso pamwe wakarebesa upenyu, chikuru mutengo-kuita uye yakadereresa kukundikana zvazvingava, "hunyambiri-Musimboti" JGSH dzakatevedzana CO2 Laser wemiti, yakatanga kwakatangwa.
Large-nemanyorerwo CO2 Laser nokuveza muchina pamwe conveyor achishanda tafura akaiswa kugadzirwa, zvichiratidza mukana zvoga kugadzirwa Laser aricheke.
The galvanometer Laser dzakatevedzana kugadzirwa mutsetse akanga pamutemo wakadzikwa.
Zvinobudirira yakatanga yendarama Laser muchiso Laser simba hurongwa.
Wokutanga Laser zvipfeko nokuveza muchina mu China kwave zvinobudirira yakataurwa Golden Laser, uye zvipfuwo uye kumisika vakapiwa mukuru rumbidzo.